Global Voices teny Malagasy » Ry Mpandika Lahatsoratra: Tianao Ve Ny Hanohana Ny Tetikasan’ny Zon’olombelona Vaovao? · Global Voices teny Malagasy » Print
Ry Mpandika Lahatsoratra: Tianao Ve Ny Hanohana Ny Tetikasan'ny Zon'olombelona Vaovao?
Voadika ny 28 Jolay 2017 5:03 GMT 1	 · Mpanoratra Kitty Garden Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Dika, Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV
Amin'ny maha-mpandika lahatsoratra ahy ao amin'ny Tambajotra Lingua, dia tiako ny manampy ny tantara mavesa-danja mba ho re, indrindra fa ireo tantara avy amin'ny olona sy ny faritra manerantany izay tsy mahazo sehatra loatra amin'ny fampitam-baovao amin'ny teny Anglisy .
Sady mpandika teny ho an'ny Global Voices aho no miasa ho an'ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena iray eto Aotearoa / Nouvelle Zélande ihany koa, ary liana tanteraka amin'ny zon'olombelona. Nanomboka niara-niasa tamin'ny ekipan'ny manampahaizana ambony (mpampianatra sekoly ambony) aho vao haingana, izay miasa any Nouvelle-Zélande sy Etazonia, amin'ny fampivelarana fomba fiasa handrefesana zon'olombelona amin'ny toerana samihafa. Antsoina hoe Human Rights Measurement Initiative (HRMI) [Fandraisana An-tanana Fandrefesana Zon'Olombelona] ny tetikasa, izay orinasa ara-tsosialy manerantany eo am-piaingana manana tanjona hamorona indray ny fomba hamokarana sy ampiasana ny lahatahirin'ny zon'olombelona, mba hanomezana aingam-panahy bebe kokoa ny fitondran-tena etika ho an'ny fanjakana sy ny mpisehatra hafa, ary mba hanomezana an'ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena lahatahiry tsara kokoa hanohanana ny asa fanandratan-teny. Raha mila fanazavana fanampiny, indro ny famintinana ny tetikasa . 
Ao anatin'ny dingana andrana amin'izao fotoana izao ny tetikasa, ary eo am-panombohana ny tranonkala izahay. kanefa mba hahazoana antoka fa miavaka sy manerantany ny tetikasa, dia mikasa ny hanomboka ny tranonkala amin'ny teny isankarazany izahay vao manonmboka . Izany no antony hangatahanay ny fanampianao!
Mitady mpilatsaka an-tsitrapo izahay mba hanampy anay handika ny votoatin'ny tranonkalanay avy amin'ny teny anglisy ho amin'ny teny espaniola, paortigey ary frantsay. Raha te ho anisan'ny tetikasa ianao, na raha manana fanontaniana, dia miangavy anao mba handefa hafatra aty amiko amin'ny alalan'ny kaontin'ny mpandray anjara – te handre vaovao avy any aminareo aho 🙂
Rehefa tonga ny fotoanan'ny dingana andrana dia mikendry ny hanampy fiteny bebe kokoa amin'ity lisitra ity izahay, koa raha tsy ao anatin'ny fiteninao ny Frantsay, Espaniola sy Portiogey kanefa te hanampy anay ianao, dia ampahafantaro ahy!
Anisan'ny fomba fiasan'ny tetikasa ny manangona vaovao amin'ny alàlan'ny fampiasana fanontaniana izay nofenoin'ny mpikaroka momba ny zon'olombelona any amin'ny firenena samihafa manerana izao tontolo izao. Mila fanampiana amin'ny fandikana ny fanontaniana ihany koa izahay raha vao manomboka ny tranonkala.
Fandraisana an-tànan'ny mpilatsaka an-tsitrapo no ataonay amin'izao fotoana izao, izay mahatonga anay mangataka ny fanohanana avy amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo mpandika teny amin'izao fotoana izao. Kanefa eo am-pitadiavana ny fanohanana ara-bola ihany koa izahay, ka mety hisy noho izany ny fandikan-teny ahazoam-bola any aoriana – Manantena aho fa hisy izany!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/28/104555/
 indro ny famintinana ny tetikasa .: http://motu.nz/assets/Uploads/HRMI-Two-Page-Brief-2.pdf